JUNE&MAY: Constipation &Tooth Decay
Posted by kyawtmin79 at 12:16 AM
ကလေးတွေ ကျန်းမာမှ လူကြီးတွေစိတ်ချမ်းသာရတာ။တော်သေးတယ် သားလေး ၀မ်းမှန်သွားလို့။
juneone May 18, 2012 at 1:49 PM
ကဇွန်းဥ ကလဲ try ကြည့်မယ်ဆိုပြီးကျွေးကြည့် တာ ထူးခြားမယ်တောင်မထင်ဘူး။အံ့သြဖွယ်ပဲ။
Thandar Lwin May 18, 2012 at 9:00 AM
ကလေး လေးတွေ ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ သူတို့အတွက်စိုးရိမ်စရာတွေ ပိုများလာတယ်...ဟေမာ ကိုတော့ ညတိုင်း ဒိန်ချဉ်တဘူး တိုက်လို့ ဟန်ကျနေတယ်။
juneone May 18, 2012 at 1:48 PM
အ၀င် အထွက်မျှတော့ ကောင်းတာပေါ့။ edwin ကတော့ အ၀င် ပဲရှိပြီး အထွက်မရှိလို့။ကြီးလာလေ ပူစရာများလေပဲ။
ကျွန်မသမီးလေးတုန်းကလဲ အဲလိုပဲ။ အီးပါဖို့ ခုံမှာထိုင်ရင် ၁ နာရီ ၂ နာရီချွေူသီးချွေးပေါက်ကျအောင် ငိုနေရတာ။ အစ်မသားလေးလိုပဲ (၅)ရက်လောက်မှတခါပါတာ။ သမီး(၃)နှစ်မှာ မူကြိုလဲစထားလိုက်ရော နေ့တိုင်းအီးပါတော့တာပဲ။ အဲဒီတော့မှသိတာ။ အစားအသောက်နဲ့တင်မပြီးဘူး။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဖို့လဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ။ နော်ဝေးမှာ မူကြိုက မနက် (၈)နာရီကနေ ညနေ (၄)နာ၇ီအထိလေ။ တနေကုန် အသကုန်ဆော့ နာရီဝက်အနည်းဆုံး ခရီးတိုလေးတွေထွက် ဆိုတော့ သမီးက စားလဲစား၊ အီးလဲပါ ဟန်လဲကျသွားတယ်။ အစ်မသားလေးက အခုလို ကန်စွန်းဥနဲ့ဟန်ကျသွားပေမယ့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလဲ နည်းနည်းလုပ်ခိုင်းပေးပါ။
juneone May 18, 2012 at 1:54 PM
သားလေးကျောင်းက ၃နာရီ ပဲဆိုတော့ အချိန်တိုတယ်။ညနေဘက်တော့ ရာသီဥတု အခြေနေပေါ်ကြည့်ပြီး ကစားကွင်း ခေါ်သွားတယ်။၁နာရီ၊၁နာရီခွဲလောက်ပေါ့။သူက ထိုင်နေတာ များလို့ ပိုချုပ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။
Theingi February 8, 2013 at 3:10 AM
Norwayမှာနေတဲ့အမရေ..ညီမကBergenကပါ..သားလေးကခုမှလေးလကျော်ပဲရှိပေမယ့် ၁၀မှတခါပဲသွားလို့ နော်ဝေမှာဘာလုပ်လို့ရလဲပြောပြပေးပါ....Helsesoster ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောပေမယ့်လည်း ကလေးကမအီမသာဖြစ်နေလို့ပါ..
JuneOne February 10, 2013 at 12:02 AM
ဟုတ်တယ် ကလေးက ၀မ်းချုပ်ရင် မအီမသာဖြစ်လာတယ်။အက်ဝင်ဆို အစားသိပ်မစားတော့ဘူး။
ဒီလင့်လေးမှာ ကလေးတွေရဲ့သွားရော လူကြီးတွေရဲ့သွားအကြောင်းတွေပါ ရှိပါတယ်။ ငယ်သွားပဲဆိုပြီး မနှုတ်သင့်တဲ့အကြောင်း၊ သွားနှုတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေပါ ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ သိပြီးသားဆိုရင် ဆရာလုပ်သလိုဖြစ်သွားရင် ဆောရီးပါနော်။ ကျွန်မ သမီးလေးတုန်းက ဒီဘလော့လေးကို အမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်။ အခုကျတော့ သူက (၇)နှစ်ရှိနေပြီ ငယ်သွားတွေ မကျိုးသေးလို့ စိတ်ပူနေရပြန်ရော။ အော်မိဘ မိဘ။
juneone May 18, 2012 at 1:59 PM
ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ။အရင်တုန်းက လင့်ထားဖူးတယ် အခုဘယ်ပျောက်သွားလဲမသိဘူး။မ၀ါ အမျိုးသားလေ။ဟုတ်ပ မိဘဖြစ်ရတာ မလွယ်ပါလား။
့််Home Sweet Home May 18, 2012 at 3:31 PM
ကျွန်တော့် သမီးလည်းဝမ်းအရမ်းချုပ်တယ်။ ၀မ်းချုပ်ပြီး ပါးစပ်မှာအနာတွေပါပေါက်လို့KK Hospital ကအရေးပေါ်မှာသွားပြီး ၀မ်းချူလိုက်ရတယ် ။ ကျွန်တော့် သမီးကတော့သေချာတယ် အစာရွေးလို့ အကြော်ကလွဲရင် ဘာမှမစားဘူး ။ အသီးမစားဘူး မစားဘူးတဲ့ အသစ်ဆိုမစားရဲဘူး ။ ကန်စွန်းဥကြွေးကြည့်အုန်းမယ်............:)
juneone May 18, 2012 at 3:48 PM
အိမ်ကသမီးလဲ အစာရွေးတယ်။အံ့သြစရာကောင်းတာ က အစာရွေးပြီး ၀မ်းနှုးစာတွေ မစားတဲ့ သမီးက ၀မ်းမှန်ပြီး၊ အကုန်စားပြီး အစားသိပ်မရွေးတဲ့ သားက ချုပ်နေတာ။သားက အစားအသောက် အသစ်ဆိုရင် try ကြည့်ချင်တယ်။အ၀င်သိပ် မဆိုးရင် စားတယ်။အခု တော်တော် ကို စိတ်ချမ်းသာ သွားတာ တကယ်။ကန်စွန်းဥ ကိုချော့ပြီး စမ်းကျွေးကြည့်ပါ။သားလေးကို ပထမ၁ရက်၊၂ရက်ဆက်တိုက်ကျွေးပြီး အခု ၃ရက်တခါလောက်ပဲကျွေးတော့လဲ
ပုံမှန် ၁ရက်ခြားတစ်ခါ သွားနေပြီ။
NSA May 19, 2012 at 4:24 AM
စကားမစပ် Home Sweet Home ဘလော့ကို ရှာတာမတွေ့တော့ဘူး..ပိတ်ထားလားမသိ.. အဲဒီက သမီးလေးကို သူ့မာမားလုပ်ကျွေးတဲ့ အစာတွေ ပြန်ဖတ်ချင်တာ.. ဘလော့ကို ရှာနေတာ ၁ ပတ်လောက်ရှိပြီ
juneone May 18, 2012 at 8:11 PM
ထပ်ဖြည့်လိုက်အုံးမယ်။ကော် ဟာဝမ်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ ကော်ရည်၊ကော်ကြော် လဲကျွေးဖူးတယ်။ ဖအေက တရုတ်လိုရတော့ တရုတ်ဘယဆေးဆိုင်မှာမေးပြီး တရုတ်ဆေးရွက်အခြောက် တွေကိုလဲ ကျိုတိုတ်ဖူးတယ်။
NSA May 19, 2012 at 4:28 AM
အစ်တီးတဲ့ Edwin လေး သနားပါတယ်.... သူ့အီးမဲမဲမာမာလေး ဆိုတာ ဖတ်ပြီး မောင်သော်က ရေးတဲ့ တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ ထဲကစာကို သတိရတယ်.. သဘောင်္ပျက်လို့ ပင်လယ်ထဲ မျောနေတာ ရက် ၃၀ လောက်လား မေ့သွားပြီ.. ကယ်တဲ့ သဘောင်္ပေါ်ရောက်တော့ သူ့ အစာအိမ်က ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တော့လို့ အီးပါဖို့ နာရီဝက်လောက်ကြိုးစားပြီးမှ လောက်စာလုံးလို စမြင်းလုံး ၁ လုံး ဒေါက်ကနဲ ကျလာတယ်ဆိုတာရေးသွားတာ..
မယ်မှုံလည်း ၂ ရက် ၃ ရက်မှ တစ်ခါ ပါတယ်.. သူလည်း တစ်ခါတစ်ခါ ကျွေးသီးချွေးပေါက်ကျတောင် ညှစ်ရတယ်...။
သွားကတော့ စိတ်ပူတယ်.. အိမ်က ကလေးလည်း နို့စို့ရင်းမှ အိပ်တတ်တာ ခက်တာပဲ ..။
juneone May 19, 2012 at 12:24 PM
သမီးကို ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးတော့ ဆရာမတွေ က ကလေးအတွက် ဘာ worries ရှိလဲမေးလို့ သွားတွေပြလိုက်တာ။နင် ဘေဘီ dentist နဲ့သွားပြတဲ့။ကလေးကို အိပ်နေရင်း နို့ပေးမစို့ နဲ့တဲ့။နို့ကိုသပ်သပ်တိုက် ပြီးတော့ ရေလေးနဲနဲ တိုက်ပြီးမှ သပ်သပ်သိပ်တဲ့။သမီးလေးက နို့မပါပဲသပ်သပ် သိပ်လို့ရပေမယ့် ညလယ်ကျရင်နို့ ၂ခါလောက် ထသောက်တယ်။အဲဒီနို့ပုလင်းတွေဟာ ဇိမ်ဆွဲပြီး မျှင်းသောက်တာ ဖြုတ်ရင် ပြန်ဆွဲယူတယ်။သိပ်ခက်တယ်။နို့နဲနဲပဲပါတဲ့နို့ဘူးပေးရင် အမှောင်ထဲထောင်ကြည့်သေးတာ။နို့ပါလားလို့။ရေထဲ့ထားတဲ့ ပုလင်းပေလိုက်ရင် လွှင့်ပစ်လိုက်ကော။
အိမ်မှာ edwin အီးက အမြဲ တော့ပစ်တခုပဲ။အခုတလောတော်တော်ကို စိတ်ချမ်းသာသွားရတာ။
Theingi February 8, 2013 at 3:23 AM
မမရေညီမသားလေးက ခုမှလေးလခွဲပဲရှိသေးတာ....၁၀ရက်တခါ.တခါတလေ၅ရက်တခါပဲသွားတယ်...မလိုပဲသားလေးရဲ့အီးအီးက တော့ပစ်တခုပဲ...သူအီးပါလို့ကတော့သူ့ပါပါးအလုပ်ကိုလဲဖုန်းဆက်ပြောရတယ်..အိပ်နေရင်လဲပြောရတယ်လေ ပျော်လွန်းလို့...calendarမှာလဲပြေးမှတ်ပေါ့.....ညီမလဲနိုင်းနိုင်းစနေမှာဖတ်ဖူးလို့ ကန်စွန်းဥကိုဖုတ်ပြီးကျွေတာ ၁ရက်ပဲရှိသေးတယ် မထူးသေးဘူး..မီးဖုတ်တာနဲ့ပြုတ်တာ အာနိသင်များကွာမလားမသိဘူးနော်...ဆရာဝန်ပြောတေ့ာအမေနို့ပဲစို့တာဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့....သူကတော့Ducolacအရည်ပေးတယ်....တိုက်ကာစပဲသွားတယ် နောက်တော့လည်းဒုန်းရင်ကဒုန်ရင်ပါပဲ....ထက်လင်းလိမ်းရင်သွားတယ်ဆိုလို့လိမ်းတာ ပထမဆုံးလိမ်းတဲ့အခါပဲသွားတယ် နောက်တော့လည်းမထူးပါဘူး.....ညီမတို့နော်ဝေးမှာ ဆရာဝန်တွေကအရမ်းအေးဆေးတယ်ဆေးကုတာ.....အားလုံးကိုခပ်အေးဆေးပဲ....ခုတော့အစာစကျွေးပြီဆိုတော့ ကန်စွန်းဥလေးကိုပြုတ်ကျွေးလိုက်မယ်နော်....နည်းလေးတွေရှိသေးရင်ပေးပါအုံးနော်..
JuneOne February 9, 2013 at 11:58 PM
အိမ်ကသားလဲ အဲ့လိုပဲ။ကဇွန်းဥနဲ့တည့်သွားတာ။အခုထိ အိုကေနေတယ်။သမီးကျတော့ ကဇွန်းဥ မကြိုက်လို့ ပြောင်းဖူးကျွေးတယ်။သူကတော့ ပြောင်းဖူး၊ငှက်ပြောသီးနဲ့ အဆင်ပြေတယ်။၀မ်းမှန်တဲ့ တူလေးတွေကိုမေးကြည့်တော့ သူ့အမေ က တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး အရွက်၊ဒါမှမဟုတ် အသီး တစ်မျိုး မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျွေးတယ်တဲ့။လိမ္မော်သီးဆို အရည်လေး ညှစ်ပြီး တိုက်တာပေါ့။ထပ်ပြီး စုံစမ်းပေးမယ်နော်။
Theingi February 14, 2013 at 12:06 AM
မရေကန်ဇွန်းဥလေးတစ်လုံးကိုပြုတ်ပြီး ည၊မနက်ကျွေးလိုက်တာ ခုတော့နေစဉ်ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီသိလား....ကျေးဇူးပါနော် နောက်လည်းတပတ်တခါလောက်တော့ကျွေးပေးရမယ်....ကလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုတင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနော်...ဗဟုသုတတွေအများကြီးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ivy လေးရဲ့ Pingu’s English International Kindergarten မူကွိုကြောငျးဆငျး ဂုဏျပွုပှဲ - အဆိုတျော အသေငျခြိုဆှေ ရဲ့ သမီးလေး Ivy ရဲ့ မူကွိုကြောငျးဆငျး ဂုဏျပွုပှဲကို ဒီကနေ့၊ ဖဖေျောဝါရီလ (၂၃) ရကျနကေ့ Lotte Hotel၊ ရနျကုနျမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ပုံရိပ...
China: The Real Sick Man Of Asia? - (Walter Mead's article from the WALL STREET JOURNAL on 03 February 2020.) China Is the Real Sick Man of Asia. Its financial markets may be even more danger...
Human Resource Succession Planning - ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ #Htain_Lin_Kyaw_HR ဒီတစ်ပတ်တော့ HR နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ စဉ်းစားမိတဲ့အခါ ၊ ကျွန်တော်တို့ဆီကို မကြာသေးခင် လာသ...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ဝူဟန်က ကယ်လာသူတွေရဲ့ကားကို ယူကရိန်း ဆန္ဒပြသူတွေ တိုက်ခိုက် - ကောလာဟာလကြာင့် တိုက်ခိုက်ခံရ (Zawgyi)⤵⤵⤵ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကနေ ကယ်ထုတ်လာသူတွေ စီးလာတဲ့ ဘတ်စကားတွေကို ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာ...